Thursday November 14, 2019 - 12:02:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xildhibaannada baarlamaanka maamulka isku magacaabay Puntland ayaa doortay guddoomiye cusub kadib markii dhowaan xilka qaadis lagu sameeyay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka.
Cabdi Rashiid Yuusuf Jibriil guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland
Fadhi ay xildhibaannadan oo aad u taageersan Saciid Deni ay ku yeesheen magaalada Garoowe ayay guddoomiye ugu doorteen nin lagu magacaabo Cabdi Rashiid Yuusuf Jibriil.
Guddoomiyaha cusub ee maanta la doortay ayaa siyaasadda kusoo biiray sanaddii 2014 waxayna si aad ah isugu dhowyihiin Saciid Deni, Cabdi Rashiid ayaa horay usoo noqday agaasimaha madaxtooyada maamulkii Cabdi Wali Gaas.
dhinaca kale Cabdi Xakiim Dhoobo daareed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 'Puntland' ayaa digniin udiray maamulka Deni, wuxuu sheegay in uu dhammaaday Puntland-tii lawada lahaa sida uu hadalka u dhigay.
” Puntland-tii ay dadku wada lahaayeen waa dhammaatay Waxaase kasii daran dadkii masuuliyadda shacabka la saaray oo dhaawici iyo meydkii oo yaal ka xishoon waayey war bal aan meydka aasno” ayuu yiri Dhooba Daareed.
Iska hor'imaad shalay ka dhacay Boosaaso waxaa ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo uu kamid ahaa taliyihii ciidamada Koontaroollada Boosaaso, maleeshiyaad beeleed kasoo weerar tagay deegaanka Carmo ayaa gudaha ugalay magaalada waxayna digniin ujeediyeen Saciid Deni.
Shir Garoowe Uga Furmaya Siyaasiyiinta Maamulka Puntland.